ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သို့မဟုတ်) သဇင်နီ - (အပိုင်း ၁၆)
အင်္ဂါနေ့၊ သြဂုတ်လ ၁၁ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၂၄ မိနစ်
မနက်ဖြန်ခရီးစဉ်အတွက် မော်တော်ယာဉ်များ ရှာ၍ငှားကြရမည်။ မနက်ဖြန်ခရီးက ရေလမ်းခရီးမဟုတ်….။ မော်တော်ကားများနှင့် ကျောင်းကုန်း၊ အိမ်မဲ…. သို့ သွားကြရမည့်ခရီး….။ ပုသိမ်တွင်ရှိသည့်ကားများ အားလုံးအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ငှား၍မရ ...
သောကြာနေ့၊ သြဂုတ်လ ၀၇ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၅ နာရီ ၅၁ မိနစ်
ဤနှုန်းသည် ဈေးကွက်တန်ဖိုးနှင့်ယှဉ်လျှင် ကျပ်ငွေတန်ဖိုးကို အဆ ၂၀၀ နီးပါး မြင့်တက်နေစေပြီး၊ ဓာတ်ငွေ့ရောင်းရငွေ ပမာဏကိုလည်း အလားတူ အဆ ၂၀၀ နီးပါး လျော့နည်းဖော်ပြစေပါသည်။ တရားဝင် ဈေးနှုန်းနှင့်သာ တွက်ချက်ဖော်ပြလျှင် ...
ကြာသပတေးနေ့၊ သြဂုတ်လ ၀၆ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၄၂ မိနစ်
မူဝါဒဆိုတာ လူပုဂ္ဂိုလ်တဦး (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းတခုက အခြေခံကျတဲ့ ဥပဒေတွေ၊ အယူဝါဒတွေ၊ ယူဆချက်တွေကို ပေါင်းစည်းပြီး ကျင့်သုံးဖို့ သတ်မှတ်ချက်နဲ့ ဥပဒေတွေကို စုစည်းထားတဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်တခု ဖြစ်ပါတယ်။ မူဝါဒတခုဟာ ...
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ သြဂုတ်လ ၀၅ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၁၂ မိနစ်	ဆောင်းပါး
မြောက်ကိုရီးယားနှင့် ဆက်သွယ်မှု၊ နျူကလီယားရည်မှန်းချက်များ စသည်တို့ကို ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အသစ်တဖန် စိတ်ဝင်စားလာကြပြန် ...
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ သြဂုတ်လ ၀၅ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၀၅ မိနစ်	ဆောင်းပါး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမှုဆင်စွဲထားပြီး အချုပ်အနှောင် ကာလကို လျှော့ဖို့မရှိ၊ တိုးဖို့သာ စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ စစ်အစိုးရအဖို့ တိုင်းပြည်ကလိုချင်တဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးများ လုပ်ရင်ဖြင့် သူတို့တွေအတွက်လည်း အကျိုးမနည်းလှပါဘူး ...
တနင်္လာနေ့၊ သြဂုတ်လ ၀၃ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၅၄ မိနစ်	ဆောင်းပါး
ဤ ခေတ်မီ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများနှင့် ခေတ်မီ တပ်မတော်ကို တည်ထောင်ရန်မှာ လွယ်ကူသည့် ကိစ္စမဟုတ်ပါ။ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများကို ဈေးကြီးပေးဝယ်ရုံနှင့် မရပါ။ သုံးတတ်အောင် နောက်ဆုံးပေါ် အတတ်ပညာများကို တတ်မြောက်ရုံနှင့်မရ - ကျွမ်းကျင်ရပါသည်။ ...
တနင်္လာနေ့၊ သြဂုတ်လ ၀၃ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၁၄ မိနစ်	ဆောင်းပါး
ဥပဒေရေးရာတိုက်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ အရှုံးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတော့မှာလား၊ အမှန်တရားအတွက် တိုက်ပွဲဝင်သူတွေအတွက် ဥပဒေက ဘာမှ အကာအကွယ် မပေးနိုင်တော့ဘူးလား။ ...
စနေနေ့၊ သြဂုတ်လ ၀၁ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၁၉ မိနစ်	ဆောင်းပါး
ဒုံးပျံလက်နက်များနှင့် အနုမြူဗုံးပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလာသော နိုင်ငံသည် ထိုအနုမြူဒုံးပျံများအား လုံခြုံစွာ ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် မတော်တဆ ပစ်ခတ်မှုသော်လည်းကောင်း၊ လူဆိုးဗိုလ်ချုပ် (Rogue-General) (သို့) ဗိုလ်ချုပ်တဦးဦးက ရူးပြီး ပစ်မိန့်မပေးနိုင်အောင် ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိ ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သို့မဟုတ်) သဇင်နီ - (အပိုင်း ၁၅)
ကြာသပတေးနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၃ နာရီ ၄၆ မိနစ်	ဆောင်းပါး
မြောင်းမြမြစ်နှင့် ငဝန်မြစ်တို့၏ဆုံရာ မြစ်ဆုံရှိ၊ ရေပြင်သည် ပင်လယ်ငယ်လေး တခုပမာအလား….။ အပြောကျယ်၏။ ရေ၏အရောင်က `ရေကြည်ပြာ´ ….။ ပြာလဲ့လဲ့ကောင်းကင်နှင့် ငဝန်မြစ် ရေကြည်ပြာရောင်အဆင်းက `သမူဟ´ ဖြစ်၍နေသည် ...
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၂၃ နာရီ ၃၈ မိနစ်	ဆောင်းပါး
မိခင်ကြီး၏ ဈာပနကိစ္စပြီးမြောက်၍ ၁၂ ရက်အကြာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အဖွဲ့ချုပ်၏ စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်အား စတင်ရပြန်သည်။ ဧရာဝတီတိုင်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ် အနောက်ဖက်ခြမ်းဆီသို့ ….။ ထိုစဉ်က …. စစ်အုပ်စုအတွင်း ...
စာမျက်နှာ 64 စုစုပေါင်း 70